Ndiani Anofanira Kupinza Bhizinesi Rayo?
Chero mugari weUnited States ane makore anopfuura gumi nemasere anokwanisa kuisa muUS, kuisa hakuna kumbove kuri nyore.
Kana iwe kana bhizinesi rako riine zvinhu zvaungade kuchengetedza, kusanganisa kana kuumba Yakatemerwa Dhizaina Kambani zvirokwazvo zvakakodzera kuti iwe utarise. Chikonzero chinonyanya kutaurwa chekusanganisa bhizinesi ndechekuchengetedza midziyo yevaridzi, vanozivikanwa sevachagovani vekambani, kana nhengo dzekambani inezvikwereti zvishoma. Nekusanganisira kana kuumba Yakatemerwa Liability Kambani (LLC), varidzi vanogona kupinda mubhizinesi vasingaratidze yavo pfuma kune zvisina kukodzera njodzi. Kugadzira iyo LLC kana kusanganisa bhizinesi rako ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekukudzivirira kubva pachikwereti chako pachako. Kunze kwezvemari shoma iri pachena kumberi, uye kudikanwa kwekuchengetedza zviitwa zvemakambani, hapana "kusarudzika" kuve nenhovo panzvimbo yekurwira chikwereti.
Chimwe chikonzero varidzi vanosanganisa mabhizinesi avo ndeyeye mikana yemitero iyo makambani anopa. Kunyangwe iyo "C" mubatanidzwa iri pasi peiyo "yakapetwa mutero", izvi zvinogona kudzivirirwa, kana zvakakodzera bhizinesi rako, nekumisikidza bhizinesi rako se "S" mubatanidzwa unopfuura-kuburikidza nemitero mibairo.
Mazhinji emabhizinesi aunoona akakukomberedza ane chero mhando bhizimusi kana mutero zvikwereti zvinoumbwa semakambani kuitira kuti zvipe zvidziviriro zvataurwa pamusoro apa. Izvi zvinonyanya kuitika kumabasa; vanachiremba, magweta, maakaundendi, vavaki, nezvimwewo ichokwadi nezvevagadziri pamatanho ese kubva kune microbrewery yemuno kuenda kuAnheuser Busch's neMiller's yebhizinesi renyika. Muchokwadi, chero chero bhizinesi chero ripi zvaro rinogara richiratidza mhando dzakasiyana dzezvikwereti.
Zvakanakira Kupinza kana Kuumba iyo LLC
Makambani uye maAdvs akasarudzika epamutemo masangano anopa zvinomanikidza bhizinesi, zviri pamutemo, uye mutero zvakanakira. Nekuumba mubatanidzwa kana LLC, unogona:
Deredza Mutoro Wako Pachako: Nepo varidzi vega proprietorship kana general kudyidzana vane chikwereti chisina muganho kune ese mabhizinesi zvinhu uye zvinhu zvemunhu, zvinosanganisira dzimba dzavo, mota, maakaundi emabhangi, uye kunyangwe maakaunzi ekurega basa, varidzi vemakambani vanochengeta rakaparadzana bhizinesi nehukama hwemunhu. Izvi zvinoshandura kuita zvakadzikiswa, kana kushomeka, njodzi kuzvinhu zvako wega.
Mutero Wakadzikiswa: Makambani anobhadhariswa mutero wakaderera pane vanhu, paine mamwe mabhizimusi anodhura, senge Hutano Inishuwarenzi, Kufamba Kwebhizinesi, Kuvaraidza Kwevatengi, nezvimwewo, kuve kuderedzwa kwemitero yebhizinesi panzvimbo yekuuya kune yako, kana kune vamwe vagovani, mari yawakawana.
Natsiridza kutendeseka kwako: Sangano rekambani rinogona kutumira meseji ine simba kune vatengi vako, vatengesi, vakwikwidzi, nevamwe vanobatana navo nezvebhizimusi nezve kuzvipira kwako kubhizimusi rakakomba uye kubudirira kuri kuitika kwako. Kune vazhinji, "Inc." kana "LLC" inomiririra kusingaperi, kuvimbika uye chimiro - chaiyo inowedzerwa kukosha kwauri nekambani yako!
Kukwezva Vatengesi uye Investment Capital: Makambani anogona kukwidza mari kuburikidza nekutengesa masheya. Vashandi vanogona kusarudza kutenga zvikamu muboka nekuda kwekuderedzwa kwemhosva.
Ita shuwa Hupenyu Hunoenderera Mberi: Makambani anogona kunge achitsungirira zviri pamutemo bhizinesi zvimiro, nehupenyu hunogona kuwedzera kupfuura kurwara, kuenda, kana kufa kwevaridzi vayo. Kupinza kunodzivirira zvinomisikidzwa zviri pamutemo kana, kumiswa kwebhizinesi rinogona kupinda kana mumwe wako kana muridzi wemba akafa kana kuenda.
Chinjana Kuva Muridzi: Kubatanidza kunokutendera iwe kuendesa wega bhizinesi kuburikidza nekutengesa sitoko.
Centralize Management: Sekambani, bhizinesi rako 'bhodhi revatungamiriri rinobata simba rekuita zvisarudzo zvakakura zvebhizinesi uye zvibvumirano zvinosunga, zvinopesana nekubatana, kunoisa simba iri mumawoko eumwe neumwe mudiwa. Saka pane kunetseka kuti mumwe munhu anogona kuita sarudzo inogona kukonzeresa kunetsekana kwemari kwauri kana kukambani yako izere, kusanganisira kuvimbisa kuti vese vatambi vakuru mukambani yako vanogara mubhodhi uye vachiziviswa.
Avo vanoshandira masevhisi ako vanogona kuomerera kuti iwe ubatanidze kambani yako kune dzakasiyana mutero kutaurira kana zvikwereti zvemhosva Semuenzaniso, kana kambani ikakubhadharira seyakazvimiririra kontrakta, pane njodzi yekuti IRS ingafunge kuti iwe uri mushandi uye nekudaro ichiita kuti iyo kambani yakakupa basa rako ive nemutero wemitero yemubhadharo uye inogona kuisa njodzi yekukuvara zvakanyanya. zvirango kana vasina kunyima vakadaro. Muzviitiko zvakaita seizvi, mutengi wako anogona kusarudza kuhaya yako mubatanidzwa pane iwe zvakananga, uye nekudaro kurega kuenda kuburikidza neiyo yose 1099 kana musaruro wevashandi kunetsa.
Iko hakuna mari inodiwa kana zvikumbaridzo zvekuumba mubatanidzwa- unogona kutanga zvidiki sekuita kwemunhu-mumwe kana kuve wakakura seCoca-Cola; denga chairo muganho!
Avo vanoda kudzikisa njodzi yavo yepamutemo.
Kubatanidza ndeimwe yematanho ekutanga epamutemo ekutora bhizinesi rako kuenda padanho rinotevera uye rakakosha kana kukwidza mari kuchidikanwa. Mumwe muzvinabhizimusi weSavvy anoongorora bhizinesi modhi uye chinzvimbo achitsvaga zviratidzo zvekuti bhizimusi ibasa rakakomba uye achaenda kure, kusanganisira iri danho rakakosha kune vanoita mari vachiona mari yekudyara mune rako bhizinesi.
Kuva neyako investment real estate mune Yakarongeka Yakarongeka Corporation, Yakatemerwa Liability Kambani kana Yakatemerwa Kudyidzana kunopa akawanda eakafanana bhizinesi mutoro kuchengetedzwa, kuchengetedzwa kwemidziyo uye mutero mabhenefiti sezvakatsanangurwa pamusoro.